Ithegi: ii-sms coupons | Martech Zone
Maka: iisms coupons
NgoLwesihlanu, ngoJuni 4, 2021 NgoLwesihlanu, ngoJuni 4, 2021 Douglas Karr
Ukuqala isicwangciso somyalezo obhaliweyo kunokuba yinkqubo yokuphumeza enzima. Yikholwe okanye ungakholelwa, abathwali ikakhulu basebenza ngesandla nanamhlanje… ngenisa amaphepha, ugcine idatha yakho kunye nemigaqo-nkqubo yabucala iphononongwe, sayina kwiimvume zeSMS. Andizami ukukubeka phantsi ukubaluleka kokuthotyelwa kwesi sixhobo, kodwa unxunguphalo lokufuduka okanye ukudibanisa isisombululo seSMS kunokuba yinto ephazamisayo kwimvume esekwe kwimvume, kwintengiso esemthethweni. Inkqubo yoThengiso lweSMS yinto eyiyo
SlickText: Zithini iiNqaku kunye nokuDityaniswa kokuXhotyiswa kweQonga lokuThengisa ngeSMS?
NgoLwesibini, nge-8 kaDisemba ngo-2020 NgoLwesithathu, uDisemba 23, 2020 Douglas Karr
Uninzi lwamashishini lucinga ngokuthumela imiyalezo njengobuchule bokuthumela umyalezo obhaliweyo kumbhalisi. Nangona kunjalo, imiyalezo yeSMS kunye neMMS iguqukile kule minyaka idlulileyo. Ngaphandle kweemfuno ezisisiseko zokuthotyelwa kwemiyalezo, amaqonga okuthengisa umyalezo oguquke kakhulu ngokubaninzi kukhetho lokuzibandakanya, ulwenziwo oluzenzekelayo, ukwahlulahlulahlula ubuqu, ubuqu, kunye nokudibanisa amandla. ISlickText liqonga lokuthumela imiyalezo enobutyebi obuzeleyo, obomeleleyo kwishishini elisisiseko elifuna ukwenza umbhalo othile unikezela konke
Sine-podcast emangalisayo eya kupapashwa kungekudala kunye no-Shel Israel malunga nencwadi yakhe, Lethal Generosity. Esinye sezihloko endibethileyo ngaphakathi kwincoko kukuba zingaphi iitekhnoloji eziye zaphunyezwa ukwandisa imveliso kunye nokuchaneka okujikeleze abathengi eneneni beka nje ulawulo lwentengiselwano ngaphakathi kwezandla zomthengi. Ngokuqinisekileyo akukho mngeni mkhulu kunokuqhuba indawo yokutyela ephumeleleyo kule mihla. Phakathi kweendleko zamandla, inzuzo yabasebenzi, imimiselo, kunye
Umhlobo olungileyo uAdam Omncinci uneqonga lokuthengisa okubhaliweyo elihamba phambili elibona amaxabiso amahle kakhulu okuhlengwa kwisibonelelo sombhalo weSMS. Enye yeendlela andixelele ngayo malunga nomthengi obonelele ngokuzisa umhlobo apho ufumana ukushukuma simahla xa uzise umhlobo kwindawo leyo. Baya kuthumela isicatshulwa ngaphandle kwesiqingatha seyure ngaphambi kwesidlo sasemini kwaye kuya kubakho umgca ophuma emnyango. Ingcinga entle kuba awunguye
UkuThengisa ngeSelfowuni: Yenzele ubuqu
NgoLwesine, Meyi 29, 2014 Douglas Karr
Uphando olwenziwa kwi-Intanethi ngo-2014 kwi-Intanethi, Isimo saBaxumi kwiNtengiso yeFowuni, lwenziwa ngo-Epreli 2014 kwaye kwajoliswa kubantu abadala abayi-1,202 eMelika. Uphando lufumanise ukuba abathengisi sele bekwamkela ukuhamba kwaye abathengi bayaphendula. Isibini kwisithathu sabaphenduli bathi bafumene umyalezo obhaliweyo ophawu lwentengiso kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo kwaye phantse isiqingatha sabathengi bafumene umyalezo obalulekileyo uluncedo. Nangona kunjalo, abathengisi baphoswa luphawu xa kusiziwa ekuthumeleni imiyalezo efanelekileyo, eyeyakho, ethi